ဘဝမှာထင်မှတ်မထားခဲ့တဲ့ Suriprise လက်ဆောင်လေးရခဲ့လို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ထူးခန့်ကျော် - TGI Daily News
သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော်က အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆယ်စုနီးပါးလောက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးကြိုးစားစား ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုပြီးရရှိလာခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ထူးခန့်ကျော်က MRTV –4မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ ” မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ ” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းလောက်ကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ဗေဒါ ဇာတ်ကောင်ပုံလေးတွေနဲ့ ကိတ်မုန့် လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယခုမှာလည်း ချစ်တဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်က ဗေဒါကြီးအတွက် တစ်ခါမှမရဖူးသေးတဲ့ Suriprise လက်ဆောင်လေးကို ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်လေးကတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် အားကစားစက်ပစ္စည်းတစ်စုံကို ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခန့်ကျော်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောထားရာမှာလည်း “ဝိုးးးးးးးးဗေဒါကြီးအတွက် ကတော့ Amazingပါပဲဗျာ ဗေဒါကြီးကိုကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီး Surprise ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်း အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…. မည်သူမည်ဝါမှန်းမသိရပေမဲ့ဒိထက်မကလှူနိုင်ပါစေ တစ်နေ့တခြားစီးပွားလာဘ်လာဘများ ဒီရေလားသကဲ့သို့ကြီးပွားတိုးတက်၍ ကပ်ကြီးသုံးပါးတို့မှလည်းကင်းဝေးပါစေနော် ကျွန်တော်အားရင်ဘတ်ထဲကအသိအမှတ်ပြုပေးကြသော ကျေးဇူးရှင်ပရိတ်သတ်အမျိုးတွေအားလုံးကို အထူးအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော် အားလုံးကျန်းမာလို့ချမ်းသာကြပါစေ” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Htoo Khant Kyaw
ဘဝမှာထငျမှတျမထားခဲ့တဲ့ Suriprise လကျဆောငျလေးရခဲ့လို့ ဝမျးသာပြျောရှငျစှာ ပွောပွလာခဲ့တဲ့ ထူးခနျ့ကြျော
သရုပျဆောငျ ထူးခနျ့ကြျောက အနုပညာအလုပျတှကေို ဆယျစုနီးပါးလောကျ လုပျကိုငျလာခဲ့ပွီး အောငျမွငျလာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးကွိုးစားစား ဆကျတိုကျလုပျကိုငျခဲ့သလို ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ပိုပွီးရရှိလာခဲ့တာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ထူးခနျ့ကြျောက MRTV –4မှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ ” မမှီဝဲနဲ့ကငျးအောငျနေ ” ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။
မကွာသေးခငျရကျပိုငျးလောကျကလညျး ဒီဇာတျလမျးလေးကို အားပေးခဈြခငျတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျက သူ့ရဲ့ ဗဒေါ ဇာတျကောငျပုံလေးတှနေဲ့ ကိတျမုနျ့ လကျဆောငျပေးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။ ယခုမှာလညျး ခဈြတဲ့ပရိသတျတဈယောကျက ဗဒေါကွီးအတှကျ တဈခါမှမရဖူးသေးတဲ့ Suriprise လကျဆောငျလေးကို ရရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလကျဆောငျလေးကတော့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျအောငျ အားကစားစကျပစ်စညျးတဈစုံကို ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ထူးခနျ့ကြျောက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမျးသာပီတိဖွဈပွီး ကြေးဇူးတငျစကားပွောထားရာမှာလညျး “ဝိုးးးးးးးးဗဒေါကွီးအတှကျ ကတော့ Amazingပါပဲဗြာ ဗဒေါကွီးကိုကနျြးမာရေးကောငျးအောငျလို့ဆိုပွီး Surprise ပွုလုပျပေးတဲ့အတှကျကိုလညျး အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…. မညျသူမညျဝါမှနျးမသိရပမေဲ့ဒိထကျမကလှူနိုငျပါစေ တဈနတေ့ခွားစီးပှားလာဘျလာဘမြား ဒီရလေားသကဲ့သို့ကွီးပှားတိုးတကျ၍ ကပျကွီးသုံးပါးတို့မှလညျးကငျးဝေးပါစနေျော ကြှနျတျောအားရငျဘတျထဲကအသိအမှတျပွုပေးကွသော ကြေးဇူးရှငျပရိတျသတျအမြိုးတှအေားလုံးကို အထူးအထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော အားလုံးကနျြးမာလို့ခမျြးသာကွပါစေ” ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Htoo Khant Kyaw